Praiminisitra Mahafaly Olivier : Efa mandray andraikitra ny fanjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : Efa mandray andraikitra ny fanjakana
03/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny fitaintainan’ny mponina manoloana ny fitrangan’ny aretina pesta, dia nanamafy omaly ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta fa efa voafehy izao ny pesta “Ny ilazana azy hoe voafehy dia fantatra ny toerana misy ilay aretina pesta. Ny zavatra atao izao dia manao ilay atao hoe “mesure prophylactique”; izany hoe, atao aloha ny famonoana ny otrikaretina eny amin’ny toerana fiantsonan’ny taxibrousse amin’ny alalan’ny fandrarahana fanafody. Toa izay koa any amin’ny seranam-piaramanidina rehetra. Efa nametrahana izay fepetra izay avokoa amin’ny toerana rehetra, ary fantatry ny tompon’andraikitra izany. Rehefa misy ny tranga mampiahiahy, dia efa karakaraina daholo ny manodidina araka izay tokony hatao fa tsy ilay olona ihany no tsaboina. Aoka samy handray andraikitra araka ny tandrify antsika tsirairay avy, satria fahasalamam-bahoaka no resahina ka samy tompon’andraikitra, na ny mpitondra fanjakana, na ny vahoaka. Mba samy hanaraka toromarika sy hitandro ny fahadiovana isika rehetra satria azo sitranina tsara, sy azo fehezina tsara io aretina pesta io”. Ankoatra izay dia nitondra tatitra ihany koa ny praiminisitra Mahafaly solonandrasana Olivier amin’ny fivoaran’ ny aretina pesta .“Manoloana ny zava-misy ankehitriny aloha dia tsy nanao ambanin-javatra ny fitrangan’ny aretina ny governemanta, nambarany fa “tsy ataon’ny governemanta ambanin-javatra ny fahasalamam-bahoaka, indrindra amin’ny firongatry ny valanaretina toa izao. Faritra maro no efa nahitana ny trangan’aretina; izay niainga tany amin’ny faritra Toamasina, Antananarivo, Fianarantsoa ary Mahajanga”.
Raha ny paikady ho entina amin’ny fanadiovana sy ny famongorana ny aretina pesta kosa dia efa misy ny lamina mipetraka hoy ny praiminisitra “amin’izao fotoana izao, dia efa nametraka lamina isaka ny faritra ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny fananganana “Cellule de crise”: Ny eto Antananarivo, dia tarihin’ny Praiminisitra, izay ahitana minisitera maromaro sy ireo mpiara-miombon’antoka. Any amin’ny faritra, dia efa nambara fa ireo Préfet, ny talem-paritry ny Fahasalamana , na ny Médecin Inspecteur miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka sy ny solontenan’ny minisitera, izay voakasik’izay no ao anatin’io “Cellule de crise” io, ary efa misy andraikitra omena azy ireo. Ireo ao amin’ny “Cellule de crise” ireo dia tokony handefa tsy tapaka ny fanentanana amin’ny haino aman-jery, ary mba hanome tarehimarika mazava, na ny eto Antananarivo aza, mba ahafantaran’ny olona ny isan’ny marary sy ny maty. Zava-dehibe hoy ny lehiben’ny governemanta ny fanajana ny fahadiovana, tsy ho an’ny isan-tokantrano ihany, fa ho an’ny tanàna iray manontolo, ary anisan’ny mampirongatra ny pesta ny fahalotoan’ny tanàna. Koa nanaovany antso avo ireo Ben’ny tanàna: “Raiso ny andraikitra, diovy ny tanàna. Izay no antony nametrahan’ny vahoaka anareo fa aza mialokaloka amin’ny fitondram-panjakana foibe fotsiny. Samia mandray ny andraikitra tandrify azy avy”.